Sat, Jul 21, 2018 | 21:30:02 NST
कोमल ओलीले गीत गाउँदा श्रीमतीसँग छमछमी नाचे कमल थापा (भिडियोसहित)
काठमाडौं, फागुन ८ – राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा श्रीमतीसँग छमछमी नाच्नुभएको छ ।
हिट्लर जस्तै देखिने व्यक्ति पक्राउ
फागुन ३ – हिट्लर जस्तै देखिने व्यक्ति अस्ट्रियामा पक्राउ परेका छन् । नाजी शासन युगको महिमा गाउँदै हिँड्ने गरेका हिट्लर जस्तै देखिने व्यक्तिलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
५०० किलोकी इमान तौल घटाउन भारतमा
माघ २९ – विश्वकै मोटी मध्येकी एक इजिप्टकी इमान अहमद तौल घटाउन भारतको मुम्बई पुग्नुभएको छ । ५ सय किलो तौलकी इमान मुम्बईको सैफी अस्पतालमा तौल घटाउने शल्यक्रियाका लागि आफ्नी दिदीसँग शनिबार बिहान पुग्नुभएको हो ।
महिलाले जन्माइन् बाख्राको पाठो !
माघ २८ – गएको मंगलबार नाइजेरियामा एउटा अनौठो घटना भयो । नाइजेरियाको रिभर राज्यमा एक महिलाले बाख्राको पाठो जस्तै शिशु जन्माएपछि सबैजना छक्क परे ।
दक्षिण भारतीय राज्य चेन्नइमा एक महिलाको टाउको भित्रबाट ज्युँदो साङ्लो निकालिएको छ । राति सुतिरहेकी ४२ वर्षकी ति महिलालाई राति अचानक टाउको दुख्न थाल्यो । दुखाई सामान्य थिएन ।
सर्प फस्यो महिलाको कानको प्वालमा
माघ २० – अमेरिकाको ओरिगन राज्यकी एक महिलाको कानको प्वालमा सर्प फसेको छ । ओरिगनकी ऐशली ग्लाईको कानको प्वालमा उनले पालेको सर्प फसेको हो । कानको प्वालबाट निस्कने प्रयास गरेको सर्प त्यहीँ फसेको हो ।
बंगुरको भालेलाई टायरको पोथी !
सुनसरी, माघ ११ – खोरभरी पोथी छन् । तर भालेले पोथी भेट्नै पाउँदैन । पोथी चाहिएको बेला खेलौना पोथीबाट सन्तुष्टी लिनुपर्ने उसको बाध्यता छ । तर उसको यही बाध्यताबाट नेपालका बंगुरपालक किसान र कृषि प्राविधिकलाई चाहिँ सन्तुष्टी मिलेको छ ।
रेलसँगको सेल्फि माेहले लियो दुई किशोरको ज्यान
माघ ५ – भारतको दिल्लीमा रेलसँग सेल्फि लिने क्रममा दुईजनाको ज्यान गएको छ । शनिबार किशोरको एक समूह गुड्दै गरेको रेलको अगाडि सेल्फि खिच्ने होडमा रेलवे ट्रयाकमा दौडेका थिए ।
प्रेमीले ‘चिप्स’ एक्लै खाएपछि प्रेमिकाले गरिन चक्कुले आक्रमण
पुस २४ – बेलायतमा एक महिलाले प्रेमीमाथि आक्रमण गरेको मुद्दामा २६ हप्ता जेल सजाय काट्ने भएकी छन् । बेलायतको ब्ल्याकबर्नकी ३४ वर्षकी डियन मार्गरेट क्लेटन आफ्ना प्रेमी सिमन हिलसहित साथीको घरमा खानाका लागि पुगेकी थिइन् ।
छोराभन्दा आमा कान्छी सुन्दा विश्वास हुने कुरो होइन । आफ्नै कोखबाट जन्माएको छोरा आफूभन्दा जेठो कसरी होला र ! तर जाजरकोटमा भने छोराभन्दा आमा एक महिनाले कान्छी भेटिएको छ ।
लसुन खाएर विश्व रेकर्ड बनाउँदै भरत, एक मिनेटमा ४२ पोटी खाए
काठमाडौं, पुस १७ – कैलाली स्थायी घर भएका भरत बिष्टले एक मिनेटमा लसुनको ४२ वटा पोटी खाएर विश्व रेकर्ड तोडेको दावी गरेका छन् ।
१२० वर्षका वृद्ध भन्छन् - यौन सम्बन्ध नराखेकाले धेरै बाँचे
१ सय २० वर्षका वृद्ध पुजारी स्वामी शिवानन्दले आफू धेरै बाँच्नुको रहस्य खुलाएका छन् । उनी भन्छन्, यौन सम्बन्ध नराखेकाले म यति धेरै बाँचेको हुँ ।
​एउटा कुकुरको मूल्य ११ करोड ६३ लाख
आयरल्याण्डका प्रहरीले एउटा शिकारी कुकुर चोरीको घटनामा संलग्न भएको भन्दै चारजनालाई पक्रेको छ । चोरी भएको कुकुरको मूल्य १० लाख यूरो अर्थात ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
विवाहका लागि वर वधू खोज्न : दुलही बजार
विवाहको मौसम सुरु भएको छ । मंसिर लागेसँगै विवाह गर्ने उमेरका छोरी छोरीलाई बा आमाले भन्न थालेका छन् - यसपाली त लगन जुराउनुपर्छ है । विवाहको मौसममा छरछिमेक नातागोतालाई विवाहको निम्तो मान्न जान भ्याइ नभ्याइ हुने त भइनै हाल्यो विवाह गराउने पण्डीतलाई झन ठूलो चटारो पर्ने गरेको छ ।
मंसिर ४ – मेक्सिकोका अधिकारीले कम्प्युटर कम्पनी डेललाई गल्तीले अनलाइनमा प्रकाशित भएको विज्ञापनमा गरिएको दाबी पूरा गर्न आदेश दिएको छ । विज्ञापनमा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीबाट निर्माण भएको राम्रो कम्प्युटर झण्डै ३० डलरमा किन्न सकिने बताएको थियो ।
१० दिनको फरकमा गर्भधारण गरेर जुम्ल्याहा सन्तान, डाक्टर अचम्मित
अष्ट्रेलियाकी केट हिललाई केही वर्षअघि डाक्टर भनेका थिए, ‘तपाइँ कहिल्यै गर्भधारण गर्न सक्नुहुन्न ।’ तर डाक्टरको भनाई गलत साबित भएको छ । केटले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् त्यो पनि १० दिनको फरकमा गर्भधारण गरेर दुई छोरी ।
​दुर्घटनानै नहुने बाइक !
कात्तिक २८ – संसारलाईनै चकित पार्दै जर्मन अटो मेकर बिएमडब्लुले एक नयाँ मोटरबाइक बजार ल्याएको छ । बढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण सयौं मानिसले दैनिक ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै बिएमडब्लुले दुर्घटनानै नहुने बाइक बजारमा ल्याएको जनाएको छ ।
सन् २०२० मा मिसेल ओबामा ?
कात्तिक २५ – अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अन्ततः सकियो । तर धेरैको आशा विपरित हिलारी क्लिन्टन पराजित हुनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा क्लिन्टनको पराजयपछि अर्को राष्ट्रपतीय चुनावका लागि उम्मेदवारका बारेमा चर्चा सुरु भइसकेको छ ।
उडिरहेको जहाजमा सर्प देखिएपछि
कात्तिक २३ – मेक्सिकोमा उड्दै गरेको जहाजमा सर्प भेटिएको छ । मेक्सिकोको उत्तरी शहर टोरियनबाट उडेको एरोमेक्सिकोको जहाजमा आइतबार सर्प भेटिएको हो । सिटमाथि यात्रुको झोला राख्ने ठाउँमा हरियो रंगको सर्प निस्किएको हो ।
इन्टरनेटमा भाइरल नेपालकी तरकारीवाली
काठमाडौं, कात्तिक १८ – केही सयमअघि पाकिस्तानका एक चिया बेच्ने युवा निलो आँखा तथा आफ्नो लुक्सका कारण इन्टरनेटमा ह्यासट्याक चायवाला नामबाट चर्चामा आए । उनी त्यसपछि फेसनवाला बने अर्थात पाकिस्तानको एक कम्पनीले उनलाई आफ्नो उत्पादनको मोडल बनायो ।
२० ब्याइफ्रेन्ड, २० आइफोन अनि.....
कात्तिक १४ – चीनको लोकप्रिय ब्लगिङ प्लेटफर्म तियान वा यी दुमा छापिएको एक ब्लगले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाएको छ । यसमा छद्य नामबाट छापिएको ब्लगमा एक युवतीले आफ्ना लागि घरको जोहो कसरी गरिन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नाङ्गो सेल्फी लिने क्रममा छात्राको कार प्रहरीको कारसँग ठोक्किएपछि
कात्तिक १३ – अमेरिकी कलेजकी एक छात्राले कार चलाउँदै गर्दा टपलेस सेल्फी लिने क्रममा उनको कार प्रहरीको कारसँग ठोक्किएको छ ।
कात्तिक २ – अस्ट्रियाको सरकारले जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलको जन्मघर भत्काउने तयारी गरेको छ । अस्ट्रिया र जर्मनीको सीमा नजिक रहेको हिटलरको जन्मघर ‘ब्रनाउ एम इन’ भत्काउने तयारी भएको हो ।
कम्मरमा २० सेन्टिमिटर लामो पुच्छर पलायो
असोज २३ – भारतका एक किशोरको कम्मरमा रहेको पुच्छर शल्यक्रियाबाट हटाइएको छ । १८ वर्षका किशोरको कम्मरमा रहेको २० सेन्टिमिटर लामो पुच्छर हटाइएको हो । भारतको नागपुरका ति किशोरको कम्मरमा १४ वर्षको उमेरमा देखिएको पुच्छर लगातार बढ्दै गएको थियो ।
राष्ट्रिय झण्डालाई कट्टु बनाउने छुटे
असोज २० – मलेसियाको राष्ट्रिय झण्डालाई कट्टु बनाएर लगाएपछि पक्राउ परेको अस्ट्रेलियाका ९ जना रिहा भएका छन् । मलेसियाको सिमाङमा गएको आइतबार फरमुला वान ग्राण्ड पिक्स प्रतियोगिताका क्रममा झण्डा अंकित कट्टु लगाउने अस्ट्रेलियाका ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको गरेको थियो ।
रहस्यमय मानिस, जो ३० वर्षदेखि घरबाहिर निस्किएका छैनन्
असोज २० – जर्मन प्रहरीले आफ्नो छोरालाई ३० वर्षदेखि घरबाहिर जान नदिएका बुवाआमाको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । जर्मनीको बेवेरियन शहरका ४३ वर्षका एक व्यक्ति गएको ३० वर्षदेखि घर बाहिर निस्किएका छैनन् ।
मोदीलाई धम्की दिएको पत्रसहित परेवा पक्राउ
भारतीय सीमा प्रहरीले एउटा परेवालाई पक्राउ गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखिएको धम्किपूर्ण चिठीसहित परेवालाई सीमा क्षेत्रबाट हिरासतमा लिइएको हो ।
राष्ट्रिय झण्डालाई कट्टु बनाएपछि
असोज १८ – मलेसियाको झण्डा अंकित कट्टु लगाएपछि ९ जना पक्राउ परेका छन् । मलेसियाको सिमाङमा गएको आइतबार फरमुला वान ग्राण्ड पिक्स प्रतियोगिताका क्रममा झण्डा अंकित कट्टु लगाउने ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
‘नो डिजायर, नो सेक्स, नो स्पाइसी फुड’
असोज १८ - भारतको बनारसमा एक सय २० वर्षका एक बाबा छन्, जो अहिले पनि तन्दुरुस्त छन् । ‘नो डिजायर, नो सेक्स, नो स्पाइसी फुड’ सिद्धान्तमा जीवन चलाउँदै आएका बाबा शिवानन्द अहिले पनि युवा जस्तै ‘फिट’ छन् ।
बाख्रा बनेका मान्छे, सजिलो छैन पशुको जीवन बाँच्न (भिडियोसहित)
आफ्नो जीवन प्राणी जातिकै सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्ने मानव धेरै छन् । तर मानव जीवनबाट आजित भएर विभिन्न पशु वा चराचुरुङ्गी बन्न चाहनेको पनि कमि छैन । मानिसले जीवनमा एकपटक मात्रै भएपनि चरा बन्ने कल्पना गरेको हुन्छ ।
फेसबुकमा बच्चा बेलाको तस्बिर राखिदिएको भन्दै आमाबुवाविरुद्ध मुद्दा !
अष्ट्रियामा आमाबुवाले आफ्नो बच्चा बेलाको फोटो फेसबुकमा सेयर गरिदिएर मानहानी गरेको भन्दै १८ वर्षकी युवतीले आमाबुवा विरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएकी छिन् ।
युवतीले युवकको घाँटीमा डोरी बाँधेर कुकुर बनाइन्
भदौ २८ – चीनको पूर्वी क्षेत्र फुजियान प्रान्तमा अनौठो दृश्य देखिएको छ । फुजियानको राजधानी फुझौको सडकमा एक युवतीले युवकलाई कुकुरलाई जस्तै डोर्‍याएको दृश्यले लगभग सबै यात्रुको ध्यानाकर्षण गर्‍यो ।
मोडल युवतीले राखिन सबैभन्दा लामो दाह्रीको कीर्तिमान
भदौ २४ – महिलाको पनि दाह्रीजुंगा आउँछ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर बेलायतकी मोडल हारनाम कुराको दाह्री भने पुरुषको भन्दा लामो छ ।
रुखलाई पक्राउ गर्ने आदेश, साङ्लाले बाँधियो रुख
पाकिस्तानको पेशावरमा भएको एउटा रुखलाई चारैतिरबाट साङ्लोले बाँधेर राखिएको छ । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ विगतमा बेलायती उपनिवेशका क्रममा भोगेको दासत्वको प्रतीकका रुपमा रुख त्यसरी बाँधेर राखिएको हो ।
अश्लिल गाली गर्नेलाई भेटे ओबामाले
भदौ २३ - अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति राड्रिगो डुटार्टेसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ओबामा र डुटार्टेबिच लाओसको राजधानी भिएनटियानमा भइरहेको आसियान शिखर सम्मेलनको क्रममा छोटो भेटवार्ता भएको अधिकारीले बताएका छन् ।
कुकुरको दूध खाएर हुर्कदै छन् सुँगुरका पाठा
कुकुर मानिसको राम्रो साथी हुन सक्छ, तर कुकुर सुँगुरको पनि राम्रो साथी अझ सुँगुरका पाठाको आमा बन्न सक्छ भन्ने कुरा अलि कठिन जस्तै लाग्छ । तर क्युवाको एक शहरमा भर्खरै ब्याएको कुकुरले आमा मरेका सुँगुरको पाठा पनि आफ्नै छाउरा सरह दूध चुसाएर हुर्काइ रहेको छ ।
आफैले रोजेको नाममा पछुतो
भदौ १६ – धेरै अभिभावक सन्तानका लागि आफूले छनौट गरेकोमा नाममा पछुताउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । मम्मसनेटले एक हजार भन्दा धेरै अभिभावकमा गरेको सर्वेक्षणको क्रममा बेलायतका १८ प्रतिशत अभिभावक आफूले छोराछोरीका लागि छनौट गरेको नाममा पछि पछुताउने गरेको देखिएको हो ।
प्रेमिकाले दिएको प्रेमको निशानीले किशोरको मृत्यु
मेक्सिकोको शहरका एक किशोरलाई उनकी प्रेमिकाले दिएको प्रेमको निशानी मृत्युको कारण बन्न पुगेको छ ।
आइसक्रिम चोरको मूल्य पाँच लाख
साउन ३० – अमेरिकाको न्युयोर्कका एक अर्बपतिले आइसक्रिम चोरी गर्नेका बारेमा जानकारी दिने व्यक्तिलाई पाँच हजार डलर (पाँच लाख ३४ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् ।
बाराक ओबामाकी छोरी रेस्टुरेन्टकी वेटर
साउन २२ – अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाकी छोरी साशा ओबामाले अहिले एक रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेकी छन् । ह्वाइट हाउसको आराम छोडेर राष्ट्रपति ओबामाकी छोरी साशाले एक रेस्टुरेन्टमा वेटरको रुपमा काम गरिरहेकी छन् ।